I-OnePlus 7 iya kuziswa ngokusesikweni ngoMeyi 14 | I-Androidsis
Sele siyazi ukuba i-OnePlus 7 iya kuziswa nini
Enye yeefowuni ekulindeleke ukuba zenziwe kule ntwasahlobo yi-OnePlus 7. Ifowuni yohlobo lwesiTshayina ibingumbandela wokuvuza kweeveki, enkosi esinayo ezinye iinkcukacha okanye uyilo lwakho. Kukwakho nokucinga okuninzi malunga nomhla wentetho esiya kuba nawo isixhobo. Kwiveki ephelileyo idatha yokuqala yayisele inikwe le ndlela ngayo.
I-OnePlus 7 iya kuziswa ngoMeyi, njengoko kwenzeka kunyaka ophelileyo kunye nenye imodeli. Kodwa ngoku Sele sinomhla othile Apho isiphelo esiphezulu sophawu lwesiTshayina siza kuboniswa. Iya kuba ngoMeyi, njengonyaka ophelileyo nasembindini.
Kwangulo mntu uthe umnxeba uza kufika phakathi ku-Meyi ngoku utyhila lo mhla. Iya kuba nge-14 kaMeyi xa le OnePlus 7 iziswa ngokusesikweni. Umhla ofana nalowo ukhethwe kunyaka ophelileyo, xa isiphelo sabo esiphezulu sanikezelwa ngokusesikweni ngomhla we-16. Ke balandela iqhinga elifanayo.
Kulungile, ke ndizokuma ngoqikelelo ndikunike yonke into oyifunayo. Ndiyakuqinisekisa oko #OnePlus7 Ungcelele lumilisela kwihlabathi liphela "nge-14 kaMeyi" 2019! Ngokuchanekileyo i-1 inyanga ishiyekile #OnePlus'Umbulali weflegi uza kutyhilwa! Ngokwokuvuza kwangaphambili: #GoBeyondSpeed! #OnePlus7Pro pic.twitter.com/KlUpHjZms7
-Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) Aprili 14, 2019
Enye yamathandabuzo aphambili yile ukuba le fowuni iza kufika yodwa okanye hayi ezivenkileni. Ukusukela kwezi veki kubekho amarhe malunga nobukho bemodeli yePro.Ngoko uphawu lwesiTshayina luya kulandela emanyathelweni abanye abanjengoHuawei okanye uSamsung, besungula iinguqulelo ezimbini zokuphela kwayo.
Nangona inkampani ingakhange iqinisekise nantoni na ukuza kuthi ga ngoku. Kodwa lonke ixesha likho Amarhe ngakumbi ngobukho bale OnePlus 7 Pro. Ngaphandle kwamathandabuzo, iya kuba kukubheja komdla kwinkampani, kuba banokunika into eyahlukileyo kwizixhobo zombini. Ke sijonge phambili kwiinkcukacha ezininzi kungekudala.
Ngapha koko, kuya kufuneka sikwenze oko linda inyanga de i-OnePlus 7 iboniswe ngokusemthethweni. Nokuba iza kufika yodwa na, yinto esiza kuyazi kwezi veki. Kodwa ubuncinci sele sinawo umhla, ekufuneka siwuphawule kwikhalenda, ngoMeyi 14 uya kuba sesikweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » OnePlus » Sele siyazi ukuba i-OnePlus 7 iya kuziswa nini
I-Meizu 16S iyakwenziwa esemthethweni ngalo Aprili 23 uzayo